Ezona processor zingcono ze-intanethi | Iindaba zeGajethi
Ngaba uyaphoswa kukusebenzisa iLizwi elikwi-Intanethi? Xa sibhala uxwebhu, siqhele ukusebenzisa usetyenziso olufana neMicrosoft Office, iApple iWork okanye ezinye iindlela zasimahla ezinjengeOpenOffice okanye iLibreoffice. Zonke zikhetho olusebenzayo olusivumelayo yenza naluphi na uxwebhu lokubhaliweyo, ispredishithi, intetho...
Kodwa kunokwenzeka ukuba ngamanye amaxesha siya kuzifumana kwikhompyuter engenazo ezi zicelo okanye ezifanayo, kwaye sizifumana kufanele ukuba sibhale uxwebhu ngokulufomatha ngokugqibeleleyo (ngokungqindilili, bukekela, iithebhu, iimbumbulu ... ). Kulapho iiprosesa zamagama ezikwi-Intanethi lusindiso lwethu. Kule nqaku sikubonisa ezona nkqubo zilungileyo ze-intanethi.
Iiprosesa zamagama akwi-Intanethi ziyasivumela ukuba senze naluphi na uhlobo loxwebhu ngesikhangeli ngaphandle kokufaka nasiphi na isicelo nangaliphi na ixesha, elibenza ukuba babe zezona zikhetho zibalaseleyo xa sifuna ukwenza amaxwebhu kunye nekhompyuter esifumana kuyo Awunaso isicelo esisemthethweni, kwaye andithethi malunga nesicelo esiqhelekileyo samanqaku esidibanisa inkqubo yokusebenza esikuso.
2 ILizwi kwi-Intanethi
3 Apple Amaphepha
4 Ukugcinwa kweStackEdit
5 Bhala iURL
11 Umbhali weZoho
UGoogle wenza iofisi epheleleyo ifumaneke kuthi ngesikhangeli kunye nenkqubo yokugcina kaGoogle Drayivu. Enkosi kuGoogle Drayivu, sinokwenza naluphi na uhlobo loxwebhu, nokuba luxwebhu lombhalo, ispredishithi okanye intetho. Ngokucacileyo ukhetho lokufomatha okubhaliweyo lilinganiselwe kodwa ezona zisisiseko kwaye zisetyenziselwa ukwenza naluphi na uxwebhu ziyafumaneka.
Ukuba sifuna ukusebenzisa le nkonzo kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu, uGoogle uya kusinyanzela ukuba sikhuphele usetyenziso olufanelekileyo lwezixhobo eziphathwayo, ke ngoko ayisiyonto sinokuyikhumbula ukuba sifuna ukwenza uxwebhu kwisixhobo soluhlobo. Esona sidingo sinye siyafana xa sihlala sithetha ngeGoogle kunye neenkonzo zayo, uneakhawunti ye-Gmail. Onke amaxwebhu esiwenzileyo anokugcinwa kuGoogle Drayivu ukuze akwazi ukufikelela nakwesiphi na isixhobo.
UGoogle ayisiyiyo kuphela inkampani enkulu kwitekhnoloji eyenza ukuba iprosesa yamagama ifumaneke kuthi ngesikhangeli, kodwa iMicrosoft yenza ukuba inguqulelo yayo ifumaneke kumsebenzisi. Igama elikwi-intanethi kwaye simahla ngokusebenzisa isikhangeli.
Ekuphela kwemfuneko yokuba sikwazi ukwenza olu hlobo loxwebhu kukuba neakhawunti ye-Microsoft, nokuba ngu @ hotmail.com, @ hotmail.es, @ outlook.com ... Onke amaxwebhu esiwenzileyo sinokugcina ngokuthe ngqo kwiakhawunti yethu Ukugcinwa kwelifu leMicrosoft OneDrive.
Iprosesa yamagama ka-Apple, edityaniswe kwi-suite yeWork kwaye iyafumaneka ukuze ikhutshelwe simahla kwiVenkile yeApple yeMac, ikwasivumela ukuba sifikelele kumqhubekekisi wegama kwi-intanethi. Kuyimfuneko kuphela ukuba ube nesazisi se-Apple, into oza kuba nayo xa usebenzisa imveliso evela kwinkampani ese-Cupertino, kungenjalo vula iakhawunti ngokugqibeleleyo ngaphandle kokuhlawula nantoni na.
Amaphepha asinika inani elikhulu leetemplate esinokuzihlela ukwenza uxwebhu esilufuna nangaliphi na ixesha. Onke amaxwebhu ayiliweyo agcinwa kwi-5 GB yendawo yasimahla asinika yona u-Apple nge-iCloud. Amaphepha asibonisa ujongano olufana kakhulu nolunye esinokufikelela kulo ngeLizwi kwi-Intanethi, kunye nenani elikhulu lokukhetha ezikhoyo.
Ngokungafaniyo nokukhethwa kwangaphambili, iprosesa yegama lewebhu Ukugcinwa kweStackEdit Akufuneki ukuba sivule iakhawunti ukuze sikwazi ukusebenzisa le nkonzo ibalaseleyo, enokuthi ibe kukudityaniswa kuxhomekeke kuhlobo lwabasebenzisi esikubo. Lo mhleli ujolise kubo bonke abo bantu babhala kwiiwebhusayithi ezikwi-intanethi ezinjengeeblogi, kuba zisivumela ukuba sithumele umxholo obhaliweyo ngqo kwibhlog kwaye ngale ndlela Sukusebenzisa ibhlog yedesktop Sisebenzisa ukubhala amanqaku okanye amaxwebhu.
Nangona singayisebenzisa ngokugqibeleleyo kwi-smartphone okanye ithebhulethi, into esingenakuyenza ngeendlela ezimbini ezidlulileyo, ukuba sifuna ukugcina uxwebhu asinakukwenza, kuba igcinwe ngqo kwisikhangeli, into esinokuyenza ikhompyutha. Into esinokuyenza kukuba gcina umxholo kuGoogle Drayivu okanye kwibhokisi yedrophu, zombini zivela kwifowuni nakwikhompyuter.
Ukuba asizifumani nje sinesidingo sokubhala uxwebhu olufomathiweyo kwikhompyuter olungenayo iprosesa yamagama, kodwa noxwebhu kufuneka lisebenzisane nabanye abantu, izinto ziyanzima kodwa ngethamsanqa Bhala iURL sisisombululo kwiingxaki zethu kuhlobo lwewebhu. Nje ukuba uxwebhu lwenziwe Sinokhetho lokuyigcina kwikhompyuter yethu kwifomathi yeWord.
Hemingway Ngaphezulu kweprosesa yamagama ekwi-Intanethi, iluncedo xa ubhala isicatshulwa ngesiNgesi, kuba iyasivumela ukuba sijonge ngalo lonke ixesha uhlobo lokubhala esilusebenzisayo, nokuba zizifutshane kakhulu okanye zide kakhulu. Ingxaki, njengoko sendiphawulile yile isebenza kuphela ngesiNgesi, kodwa ukuba siyinika ixesha elincinci kunokwenzeka ukuba kungekudala liza kuvela ngeSpanish.
Uyilo Ngumzalwana omdala weStackEdit, kuba isinika ukhetho olufanayo kodwa olwandisiweyo, esivumela ukuba sigcine amaxwebhu ayenziwe kwiDropbox okanye kuGoogle Drayivu ukongeza ekuyivuleni ngokuthe ngqo kwezi nkonzo zokugcina ilifu. Ukupapashwa kweeblogger kusinika ezinye iindlela ezininzi kunalezo sinokuzifumana kwiStackEdit kodwa ukuba asithandi ukwenza iiakhawunti kuyo nayiphi na inkonzo, sineendaba ezimbi, kuba uyilo luyenza Kuya kusinyanzela ukuba sivule iakhawunti kweli qonga ukuze siyisebenzise ngokukhululekileyo.
IZenPen yiprosesa yamagama elula kakhulu kodwa isinika ezona mfuno zisezantsi esinokuzisebenzisa ukwenza naluphi na uxwebhu olufomathiweyo. Isivumela ukuba sandise ubungakanani bescreen ukuze kuboniswe kuphela umbhalo osibhalayo kwiscreen, ukuguqula imibala yescreen, ukongeza ikhawuntara yegama kwaye ugcine amaxwebhu kwiifomathi zeMarkdown, HTML kunye nePlain. Akukho mfuneko yokuba sibhalise, kufuneka sivule iwebhu kwaye sibhale.
Umbhali Isinika iprosesa yamagama ene-aesthetics ye-MS-DOS, enemvelaphi emnyama eneleta eluhlaza, njengee-phosphor monitors ezazisetyenziswa kwii-80s zokuqala. Umbhali njengoZenpen isusa naluphi na uhlobo lokuphazamiseka kwiscreen ke sinako ukugxila kwinto ebaluleke ngokwenene. Le nkonzo ifuna ukuba senze iakhawunti ukuze siyisebenzise.
typWrittr isinika indlela eyahlukileyo xa isiza yenza amaxwebhu kwi-intanethi simahla, efuna iakhawunti ukuze ikwazi ukuyisebenzisa. Njengoko sinokubona kumfanekiso ongentla, iprosesa yasimahla yamagama ekwi-Intanethi isivumela ukuba sikhethe umfanekiso ongasemva ngokokuthanda kwethu okanye umxholo esiwubhalayo ukuze usebenze njengokhuthazo.
Umbhali weZoho Isinika umba ofanayo kwinto esinokuyifumana kuyo nayiphi na iprosesa yamagama ukuba siyisebenzise, ​​apho sinokukhetha khona ifonti, ubungakanani, usike kwaye uncamathisele isicatshulwa, ukufomatha isicatshulwa ... yivule kamva ngomhleli wohlobo lweOfisi yedesktop. Ubuhle isikhumbuza uninzi lwegama elikwi-Intanethi kwiLizwi ebesithetha ngayo ekuqaleni kweli nqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Iiprosesa zamagama ezikwi-Intanethi
IHarvard idala eyona khompyuter inamandla kakhulu emhlabeni